SAWIR QURXIYE – iM252 – Ogow Waxa Cusub
Xog iyo Qormo
Nalka Sawirka iM252
Bal ka waran adiga oo saaran gaari ama jooga guriga xilli habeen ah, isla markaana aad dooneyso in aad muuqaal iska duubto, waxaad dabcan u baahantahay iftiin kugu filan si aad sawir isaga qaaddo ama aad muuqaal isaga duubto.
iM252 Selfie light waa nal yar oo aad ku xiran karto qeybta sare ama dhinacyada telefoonkaaga, kaas oo kuu sahlaya in aad iska qaaddo sawirro iftiin leh ama iska duubto muuqaal wanaagsan xilliyada habeenkii iyo meelaha mugdiga ah ee aan lahayn iftiin ku filan sawir qaadista. Waxyaabo kale oo badanna waad ku qabsan kartaa.
Nalka Sawirka iM252, waxa aad u adeegsan kartaa:
In aad ku xirato telefoonkaaga si aad isaga qaaddo sawir leh iftiin wanaagsan.
In aad ku xirato Tablet ama iPad si aad sawir isaga qaaddo.
In aad ku xirato Computer-kaaga si aad uga qeyb gasho shir online ah ama fasal.
Waxa uu leeyahay saddex heer oo iftiin ah oo aad kala xulan karto. 1, 2, 3. Midba kan ka dambeeyaa waa uu ka iftiin badanyahay.
Waad jaajareyn kartaa, oo waxa uu wataa fiilada jaajarka ee Micro USB.
Waxaad ku adeegsan kartaa kaamirooyinka hore iyo kuwa dambe ee telefoonkaaga.
Nalka Sawirka iM252 – iM252 Selfie Light
Qaadista sawir ama muuqaal iftiin leh.
Tirada Dadka Iibsaday
WAX KA OGOW ADEEGSIGA NALKAN
IIBSO, HADDA HEL
WAY FUDUDAHAY HELISTA QALABYADEENNA
Qalabyadeenna waxa ay kugu iman karaan goobta aad joogto, ama waxaad ka doonan kartaa xarunta kugu dhow ee lagu iibiyo qalabyadeenna. Fadlan haka caajisin in aad nagala soo xiriirto Whatsappkeenna.
WHATSAPP +252 614 888 887
WAAN TIJAABINAA QALABYADEENNA, WAAN HUBINNAA TAYADOODA!
© Xuquuqda Mareegtan Waxaa leh iM252 | All Rights Reserved | iM252 2021
Markii aan aragnay in qalabyo badan oo aan tayo lahayn ay suuqyada yimaadeen, waxaan go’aansannay in aan la xiriirno shirkado sameeya qalabyada fudud ee ay dadku u baahanyihiin, kadibna aan tijaabooyin adag marsiinno qalabyadaas, marka aan hubinno tayadoodana aan bulshada u soo bandhigno si ay iibsadaan uguna biiriyaan qalabyada waxtarka leh ee ay adeegsadaan maalin weliba.